USidekick: Isiphequluli seWebhu se-Experience Better Work Work | Kusuka kuLinux
USidekick: Isiphequluli seWebhu ukuze uthole isipiliyoni esingcono somsebenzi online.
Njengoba sesivele sazi kahle, sonke esivame ukusebenzisa ikhompyutha, i- Isiphequluli sewebhu kungabhekwa kalula uhlelo lokusebenza olusetshenziswe kakhulu cishe noma yikuphi Isistimu yokusebenza kubalulekile. Futhi eduze kwalokhu impela, Ihhovisi Suites, Los Iziphequluli zefayela (amafayela) futhi i Izicelo Zokuthumela Imiyalezo Ngokushesha.
Futhi ngenxa yalokhu, sivame ukuthumela mayelana nesiphequluli esithile sewebhu, noma ngabe sisha noma kungenxa yesibuyekezo esikhishwe. Futhi kule ncwadi yamanje, ithuba lokuthi I-Sidekick, isiphequluli sewebhu esithandekayo esithembisa imvelo esheshayo nephumelelayo ye- isipiliyoni esingcono somsebenzi online nokusebenzisana.
Ngaphambi kokungena odabeni, khumbula ukuthi ngaphandle kwalokhu okusha Isiphequluli sewebhu seSidekick, kukhona amanye ama-multiplatform noma cha, angaba yi Ama-Desktops (i-GUI) noma amaTheminali (i-CLI), futhi banokwehluka Izinzuzo Ububi ezicini ezahlukahlukene ezingaba wusizo kokuhlukile izinhlobo zabasebenzisi / izidingo, njenge:
Isiphequluli se-IronWare se-SRWare
Lezi yizona ezaziwa kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu, ngakho-ke ngokuqinisekile ziningi futhi ezintsha zizoqhubeka ukuvela ngokuhamba kwesikhathi. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngabo, ngokuqinisekile sizoba ne- okuthunyelwe kwangaphambilini zilungele eziningi zazo esikumema ukuthi uzibheke futhi uzifunde, njengokulandelayo:
1 USidekick: Isiphequluli sewebhu sigxile ekusebenzeni ku-inthanethi
1.1 Siyini isiphequluli sewebhu seSidekick?
1.2 Ukufakwa kwe-Sidekick nokulungiselelwa
USidekick: Isiphequluli sewebhu sigxile ekusebenzeni ku-inthanethi
Siyini isiphequluli sewebhu seSidekick?
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni, ichazwa ngale ndlela elandelayo:
"ISidekick uhlelo olusha lokusebenza olusebenzayo olususelwa kusiphequluli seChromium. Idizayinelwe ukuba nesipiliyoni sokugcina emsebenzini, kuletha ithimba lakho kanye nawo wonke amathuluzi wewebhu owasebenzisayo ndawonye ku-interface eyodwa."
Futhi ngalokho, thembisa ukunciphisa noma ukuqeda ukusetshenziswa okweqile kwamathebhu wesiphequluli noma amawindi noma izinhlelo zokusebenza zedeskithophu, ezingavamisi ukuhlangana kahle neminye imisebenzi yansuku zonke yomsebenzisi ojwayelekile, ikakhulukazi leyo eyenziwa ngaphakathi kwesiphequluli.
Futhi, USidekick ugqamile ngenxa yezici okulandelayo:
Ama-Trackers Ukuvimba: Ngoba abanayo imodeli yebhizinisi esuselwe ekukhangiseni, ngakho-ke bavimba izikhangiso nezilandeleli ngaphandle kokuyekethisa.
Ukumiswa kokuqhuma kwe-AINgoba igcina okudingekayo kwimemori, imisa ngokuzenzakalela amathebhu umsebenzisi angadingi ngesikhathi esithile.
Ukuphathwa kwememori okuthuthukisiwe kwamathebhuNgoba isebenzisa imemori engaphansi kakhulu lapho isebenza namathebhu afanayo.
Ukufakwa kwe-Sidekick nokulungiselelwa
Ngemuva kokuyilayisha, kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni, futhi ngaphakathi ifomethi ".deb", ngecala lami elithile, ngoba, ngisebenzisa I-MX Linux 19, Kufanele nje ngiyifake kusuka kufolda "Landa" usebenzisa umyalo olandelayo:
Futhi-ke ungayivula, ekhombisa okulandelayo izinyathelo zokusetha ukuqhubeka ukuqedela yonke inqubo yokufaka:
Ngokufingqa, futhi njengoba kungabonakala, uhlelo lokusebenza okuthakazelisayo kakhulu ngokusekelwe ku I-Chromium, futhi yakhelwe ukunikela ngesipiliyoni esingcono futhi esisheshayo lapho usebenza ku Isiphequluli sewebhu. Endabeni yami ethile, gcwalisa ukucushwa usebenzisa ikhodi etholwe ngeposi esikhundleni sokungena ngemvume ngqo nayo. Futhi kwabonakala kimi kunengqondo ukusetshenziswa kwememori yakho (2,9% ye-RAM yami kuqhathaniswa no-5.2% weFirefox) futhi inhle kakhulu futhi iyasebenza Ama-webapps wesitayela se-Opera esakhelwe ngaphakathi, okungukuthi, kubha eseceleni yangakwesobunxele.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nesiphequluli sewebhu esibizwa «Sidekick» lokho kuthembisa indawo esheshayo nephumelelayo yokuthola isipiliyoni esingcono somsebenzi online nokusebenzisana; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » USidekick: Isiphequluli seWebhu ukuze uthole isipiliyoni esingcono somsebenzi online
Ngingene ekhasini le-SIdekick futhi akubonakali njengesoftware yamahhala, ngisho nomthombo ovulekile ...
Kuhle ukuthi kungumsebenzi wokuhweba nokuthi kuxoxwa ngawo lapha, kepha leyo mininingwane kufanele icaciswe endimeni, ucabangani?
Sanibonani, Bertie. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Angitholanga ndawo kuwebhusayithi yakho amagama athi "Isoftware Emahhala Nomthombo Ovulekile", kepha ngicabanga ukuthi iSidekick ingumthombo ovulekile ngokuphelele noma ngokwengxenye, ngoba isuselwa kuChromium, okuwumthombo ovulekile weGoogle I-Chrome.
UDiego (omunye) kusho
Lokho ukuqala ukukusebenzisa kudinga ukubhaliswa ... saqala kabi uma kukhulunywa ngobumfihlo. Uma siyifaka ku-Blink "obiza ikhaya" ukutshela i-Google ngalokho esikwenzile ngesikhathi seseshini, ngaphandle kokulawula okungenzeka noma okungenani akulula kumsebenzisi, angiqiniseki.
O, nomsebenzi wokulanda i-RAM kusuka kumathebhu angasetshenzisiwe utholakala nge-add-on elula ebizwa nge-Auto Tab Discard:
Phendula u-Diego (omunye)
Ukubingelela, Diego. Siyabonga ngokuphawula kwakho nokunikela okuhle kakhulu kusuka kokuhlangenwe nakho kwakho. Ngokwami, ngisasebenzisa iFirefox ngemuva kokuzama iziphequluli eziningi.
I-Guix 1.2: Isifundo Sokufaka Ithuluzi Lokuphatha Iphakheji